Inzalo Imboni | I-China Abakhiqizi Benzalo kanye nabahlinzeki
Inzalo yethebhulethi MOST-T (18L-80L)
I-MOST-T uhlobo lwenzalo yetafula yetafula esheshayo, ephephile futhi eyongayo. Kujwayelekile ukusetshenziswa emnyangweni we-stomatological, umnyango we-ophthalmological, igumbi lokuhlinzwa kanye ne-CSSD ukwenza inzalo yensimbi esongwe noma engavaliwe, indwangu, i-Hollow A, Hollow B, medium medium, uketshezi olungavaliwe, njll.
Idizayini ihlangabezana nemikhombandlela ye-CE efanelekile (njenge-MDD 93/42 / EEC ne-PED 97/23 / EEC) namazinga abalulekile afana ne-EN13060.
MAST-V (Vertical beya umnyango, 280L-800L)
I-MAST-V iyithuluzi lokuhlanza elisheshayo, elihlangene nelisebenza ngezindlela eziningi elacwaninga futhi lathuthukiswa ngokuya ngezidingo zakamuva zesikhungo sezokwelapha ne-CSSD. Idizayinelwe futhi yakhiwa ihlanganisa amandla aphezulu nezindleko-kahle, ngenkathi inikeza ukuthembeka okuphezulu kokusebenza nokulungiswa okulula.
Idizayini yezivumelwano zekamelo nombuso we-GB1502011, GB8599-2008, CE, i-European EN285 ejwayelekile, i-ASME ne-PED.
Idivayisi Yokulahlwa Kwegesi EO
Ngokusebenzisa okushisa okuphezulu okushisa, umshini wokwelashwa kwegesi we-ethylene oxide ungabola igesi ye-EO ibe yisikhutha ne-vapor yamanzi bese ikhishelwa ngaphandle ngaphandle, ngaphandle kwesidingo sokufaka ipayipi lokukhishwa okuphezulu. Ukusebenza kokubola kuphakeme kune-99.9%, okunciphisa kakhulu ukukhishwa kwe-ethylene oxide.
I-Ethylene Oxide Sterilizer
I-XG2.C sterilizer yochungechunge ithatha igesi engu-100% ye-ethylene oxide (EO) njengendawo yokuvala inzalo. Kusetshenziswa ikakhulukazi ukwenza inzalo yethuluzi lezokwelapha eliqondile, insimbi ebonakalayo, kanye nensimbi yezokwelapha, ipulasitiki nezinto zokwelapha ezingakwazi ukubekezelela ukushisa okuphezulu nokuvala inzalo.
I-Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer
I-SHINVA Plasma sterilizer ithatha i-H202 njenge-agent yokuhlanza futhi yakha isimo se-plasmatic ye-H202 ngenkambu kagesi ngaphansi kwezinga lokushisa eliphansi. Ihlanganisa i-H202 enegesi neplasmatic ukwenza inzalo yezinto ezisegumbini bese ibola i-H202 esele ngemuva kokuvala inzalo.
I-MCSG Electric Electric Steam Generator
Le mishini isebenzisa umusi wezimboni ukushisa amanzi amsulwa ukukhiqiza umusi omsulwa. Isetshenziswa kabanzi ezimbonini zezokwelapha, ezithaka imithi kanye nezokudla ukuhlinzeka umusi osezingeni eliphakeme wokuvala inzalo esezingeni eliphakeme. Ihlangabezana nezidingo zekhwalithi yomusi futhi ingavimbela ngempumelelo ipakethe lephuzi nenkinga yesikhwama esimanzi ebangelwa ikhwalithi empofu yomusi.
Hlanza u-Q Cleaner Electric Steam Generator
I-Clean Q series ehlanzekile i-generator kagesi ekhiqiza ugesi ikhiqiza umusi ohlanzekile ngokushisa amanzi amsulwa. Inezinzuzo zosayizi omncane, ukufudumeza okusheshayo, akukho ukungcola, ukusebenza okulula nokuthembeka okuphezulu. Ingakwazi ukuxazulula ngempumelelo ukungcola kokugqwala kwinsimbi nokugqoka kwempahla.
Ingasetshenziswa kabanzi emnyangweni we-stomatology ne-ophthalmology, igumbi lokusebenza nezinye izikhungo zezokwelapha. Ifanele zonke izinsimbi eziqinile ezisongwe noma ezingavaliwe, i-A-class cavity instrument (amazinyo esandla kanye nama-endoscopes), izinsimbi ezingafakelwa, indwangu yokugqoka kanye namashubhu enjoloba, njll.
MAST-H (Ovundlile beya umnyango, 1000L-2000L)
I-MAST-H ingenye yohlobo olusha lwesimo sokuhlanza isitimu sobuciko esinosayizi omkhulu ngenkathi ihlinzeka ngomnyango wokuhambisa othomathikhi othomathikhi, isilawuli esihlakaniphile, ukusebenza okuthembekile nokunakekelwa okulula, okulungele ikhasimende elisezingeni eliphakeme elinesikali esikhulu. Kuthuthukiswa ngokuya ngezidingo zakamuva zesikhungo sezokwelapha ne-CSSD.
I-MAST-A iyisitshalo esisheshayo, esihlangene nesisebenza ngezindlela eziningi esicwaningwa futhi sithuthukiswe ngokuya ngezidingo zakamuva zesikhungo sezokwelapha ne-CSSD. Idizayinelwe futhi yakhiwa ihlanganisa amandla aphezulu nezindleko-kahle, ngenkathi inikeza ukuthembeka okuphezulu kokusebenza nokulungiswa okulula.
Uhlobo lwe-Semi-Autoclave Vertical Type Autoclaves LMQ.C (Semi-othomathikhi, 50L-80L)
Uchungechunge lwe-LMQ.C lungenye yama-sterilizers aqondile. Kuthatha umusi njengendawo yayo yokuvala inzalo ephephile futhi enomnotho. Zijwayele ukusetshenziswa esibhedlela esincane, emtholampilo, esikhungweni sokunakekelwa kwezempilo, elabhoratri ukwenza inzalo yendwangu, izitsha, isiko eliphakathi nendawo, uketshezi olungavaliwe, iraba, njll. Ukwakheka kwamakamelo kuvumelana nombuso we-GB1502011, GB8599-2008, CE no-EN285 okujwayelekile.
Uhlobo oluzenzakalelayo oluqondile lwe-Autoclaves LMQ.C (Okuzenzakalelayo, 50L-100L)